यस्तो ठाउँमा यसरी मा’रिएका रहेछन नवराज र उनका साथीहरु ! - MazzakoNews
Home / देश / यस्तो ठाउँमा यसरी मा’रिएका रहेछन नवराज र उनका साथीहरु !
Mazzako News 26th May 2020	देश Leaveacomment
नवराज र उनका १९ जना साथी बाटोमा हौ’सिँदै गएको बताउँछन् । तर जब युवा सोती पुगे, माहोल एकाएक बि’ग्रियो ।क’थित द’लित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको ‘जात’ नमिले पनि उनीहरु वि’वाह ब’न्धनमा बाँ’धिन चाहन्थे । तर, नवराजका आमाबाबालाई भने अ’न्तरजातीय विवाह मन परेको थिएन ।
छोरीले ढि’पी गरेपछि हुन्छ भन्ने मु’डमा आफूहरु पुगेको अभिभावक बताउँछन् । त्यसैले नवराज शनिबार राति आफ्ना साथीहरुलाई लिएर दुलही ल्याउन सोती गएका थिए ।पटक–पटक मा’नसिकरूपमा त’नाव र शा’रीरिकरूपमा कु’टपिट व्यहोरोका नवराजलाई शनिबार ठूलो सङ्ख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएका कारण सोहीअनुसार १९ साथी लिएर सोती गएका थिए ।
जब उनीहरु घर नजिकै पुग्दा युवतीभन्दा, युवतीकी आमाको नजर युवामा प-यो । त्यसपछि उनले ‘जति पिटाइ खाए पनि केही लागेन है, फेरि आइस् आज त मा’रेर फा’लिन्छ’ भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएपछि युवामाथि कु’टपिट सुरु भएको घा’इते युवा आशिष विकले बताए ।
कु’टपिट सुरु हुँदै गर्दा आफूहरु भा’गेर करिब चार किलोमिटर दूरी पार गरेको आशिषको भनाइ छ । ल’खेटी–लखेटी भेरी नदीसम्म पु-याउँदा धेरै साथी घा’इते भएको उनको दा’बी छ । नवराजको शनिबार नै मृ’त्यु भयो भने ज्यान ब’चाउन नदीमा हा’मफालेका मध्ये चौरजहारी नगरपालिका–१ टीकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका–४ का गणेश बुढाको पानीमै डु’बेर मृ’त्यु भयो ।
कु’टाइबाट घा’इते भएका युवाले पानीमा पौ’डिन नसक्दा मृ’त्यु भएको घा’इतेले बताएका छन् । अन्य भेरी नगरपालिकाका सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही अहिले पनि बे’पत्ता छन् ।
मृ’तक युवाका बुवाले भने, ‘हाम्रो जा’त नमिलेकै हो, यो विवाह ठिक छैन भनेर मैले पटक–पटक भनेको थिएँ । दुईपटक प्रहरीकहाँ उनहरुले आफै उ’जुरी गर्दा छ’लफलमा जाँदा उनीहरु आफै छ’लफलमा नआउँदा हामी फ’र्किएका थियौँ ।
नवराजका बाबाका अनुसार ती युवती पुसमा दुईपटक नवराजको घरमा आएकी थिइन् । नवराजका बुवाले यो अ’न्तरजातीय कुरा भएकाले सम्भव छैन भनी पठाइदिएका थिए । ‘शनिबार बुहारी लिन जाँदा यो अवस्था आयो’, नवराजका बुवाले भने । घा’इते युवा सरोज भँडेल भन्छन्, ‘हामी आधा घण्टासम्म सडकमा दै’डिरहेका थियौँ ।
सडक तेर्सो भएकाले मा’रिने ड’र भएपछि नदीमा हा’मफालेका थियौँ । आफूहरुले नदीमा हा’मफाले पनि ढुङ्गामुढा ग’र्न छा’डिएन । प्रहरी आएपछि हामीलाई पक्राउ गरेपछि बल्ल हामी सु’रक्षित भएको म’हसुस भयो ।’
घ’टनामा दो’षी रहेको आरोपमा रुकुम प्रहरीले चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ललगायत १२ जनालाई पक्राउ गरिएको जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएएपी) किशोर श्रेष्ठले बताए । मृ’तक युवाको श’व जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ ।घ’टनालाई ढा’कछोप गर्न खोजिएको भन्दै आ’फन्तले श’वको परीक्षण गर्न दिएका छैनन् ।
रुकुमपश्चिमका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठकबहादुर केसीले दुवै जिल्लाका प्रहरीबीच स’मन्वय भएर छलफल चलिरहेको र अनुसन्धान पनि जा’री रहेको बताए । त्यस्तै घ’टनाको न्यायिक छा’नविन होस् र पी’डितले न्या’य पा’ऊन् भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीले मा’ग गरेकी छन् ।
त्यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको तर्फबाट त’दारुकताका साथ उक्त घ’टनाको अध्ययन र अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ, विश्वास गरौँ, घ’टनाको उचित छा’नविनसहित दो’षीहरुलाई का’रवाही हुनेछ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्र’भावकारी बनाउन सबैले सहयोग गरौँ ।’
डिएसपी केसीका अनुसार प्रहरीले वडाध्यक्ष मल्लका साथै केटी, केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ललगायत १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । घ’टनामा सं’लग्न अन्यको खोजी भइरहेकोे छ ।
मृ’तक तीनै जनाको श’व भेरी नदी किनारमा भेटिएको थियो । अन्यको खो’जीकार्य जारी रहेको छ । घ’टनामा परेर भेरी नगरपालिकाका सुदीप खड्का, मदन शाही, सरोज भँडेल, आशिष विकलगायत १२ घा’इते भएका छन् ।खड्का र शाहीको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन् । रासस
Previous सुत्ने बेला पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि भोलिको राशिफल पढ्नुहोस
Next रूकुम घ’टना : नवराजसहित ४ जनाको श’व फेला, दुई जना अझै बेपत्ता